उमेर अनुसार बच्चाहरु को लागि 44 सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेलहरू
इसहाक | 17/12/2021 17:48 | अद्यावधिक गरियो 21/12/2021 09:01 | सामान्य
छनौट गर्दा बच्चाहरु को लागि मजेदार बोर्ड खेल, धेरै कारकहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। एकातिर, उपयुक्त उमेर जसको लागि त्यो खेल डिजाइन गरिएको छ। अर्को प्रश्न हो कि ऊ एक्लै खेल्छ वा अन्य बच्चाहरूसँग, वा यदि उसले आफ्ना आमाबाबु वा वयस्कहरूसँग खेल्छ भने, किनकि त्यहाँ पनि छन्। सबैका लागि डिजाइन गरिएको बोर्ड खेल। र, निस्सन्देह, यदि खेल शैक्षिक र मनोरञ्जनात्मक छ भने, धेरै राम्रो।
यस गाइडमा तपाईलाई चाहिने सबै सामग्री हुनेछ सबै भन्दा राम्रो छान्नुहोस् बालबालिकाका लागि बोर्ड खेलहरू, शैक्षिक बोर्ड खेलहरूको लागि विशेष खण्डको अतिरिक्त। कन्सोल र भिडियो गेमहरूको लागि धेरै स्वस्थ र अधिक सामाजिक विकल्प। उनीहरूलाई नाबालिगको विकासमा विशेषज्ञहरू द्वारा पनि सल्लाह दिइन्छ, किनकि उनीहरूले राम्रो मोटर कौशल, अवलोकन, स्थानिक दृष्टि, एकाग्रता, कल्पना र रचनात्मकता, निर्णय लिने, आदि विकास गर्छन्। निस्सन्देह एक महान उपहार ...
1 बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बिक्री बोर्ड खेल
1.1 Trajins खेल - भाइरस
2 उमेर अनुसार बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल
2.1 To देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि
2.1.2 Diset म तस्बिरहरु संग सिक्न
2.1.3 बीन एडेला मौरी
2.1.4 बीन पहिलो फल
2.1.5 फालोमिर स्पाइक समुद्री डाकू
2.2 To देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि
2.2.1 न उठ बाबु !
2.2.2 हसब्रो जिद्दी
2.2.3 हसब्रो स्लोपी प्लम्बर
2.2.4 गोलियाथ एन्टोन जाम्पोन
2.2.5 गोलियाथ जब्स
2.2.6 डिसेट पार्टी र को डिज्नी
2.2.7 हसब्रो स्कूपर
2.2.8 हसब्रो क्रोकोडाइल टूथपिक
2.2.9 लुलिडो ग्राबोलो जूनियर
2.2.10 Falomir म के हुँ?
2.36र 12 वर्ष को बीच बच्चाहरु को लागि बोर्ड खेल
2.3.1 हसब्रो मोनोपोली फोर्टनाइट
2.3.2 Ravensburger Minecraft बिल्डर्स र Biomes
2.3.3 तुच्छ खोज ड्रैगन बल
2.3.5 Devir जादुई भूलभुलैया
2.3.6 आतंकको महल
2.3.7 डिसेट पार्टी एण्ड को जुनियर
2.3.8 हसब्रो सञ्चालन
2.3.9 हसब्रो को हो?
2.4 शैक्षिक बोर्ड खेलहरू
2.4.1 भूत घर
2.4.2 मन्दिर जाल
2.4.3 रंग राक्षस
2.5 बच्चाहरु र वयस्कों को लागि बोर्ड खेल
2.5.1 १० टुक्रा पहेली
2.5.2 सौर्यमण्डलको थ्रीडी पजल
2.5.3 बहु-खेल तालिका
2.5.4 म्याटेल स्क्र्याबल मूल
2.5.5 म्याटेल पिक्सनरी
2.5.6 कि हरा!
2.5.7 पहिलो यात्रा
2.5.8 Hasbro इशाराहरू
3 नाबालिगहरूको लागि बोर्ड खेल खरीद गाइड
3.1 सिफारिस गरिएको न्यूनतम उमेर
3.4 पोर्टेबिलिटी र अर्डर
बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बिक्री बोर्ड खेल
सबै भन्दा राम्रो बिक्रेताहरू बीच, वा बच्चाहरूको लागि बोर्ड खेलहरू सबै भन्दा राम्रो बिक्री र सफल, स्पष्ट कारणहरूको लागि बिक्रीको त्यो स्तरमा भएको छ। तिनीहरू सबैभन्दा मनपर्ने, र सबै भन्दा राम्रो ज्ञात छन्, त्यसैले तिनीहरूलाई विशेष हाइलाइट गर्नुपर्छ:
Trajins खेल - भाइरस
Tranjis खेल - भाइरस! -...
यो सबै भन्दा राम्रो बिक्रेता मध्ये एक हो, र यो कम को लागी छैन। यो2खेलाडीहरूको लागि खेल हो, 8 वर्षको उमेरबाट र सम्पूर्ण परिवारको लागि उपयुक्त। यो लत र धेरै रमाइलो छ, ढुवानी गर्न सजिलो छ, र जसमा तपाईंले जारी गरिएको भाइरसको सामना गर्नुपर्नेछ। महामारीबाट बच्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् र डरलाग्दो रोगहरूको फैलावट रोक्न स्वस्थ शरीरलाई अलग गरेर भाइरस उन्मूलन गर्ने पहिलो बन्नुहोस्।
यो युवा र वृद्ध को लागी निश्चित कार्ड बोर्ड खेलहरु मध्ये एक हो। यो पालो र राउन्डमा खेलिन्छ, सुरुबाट खेल्न सक्षम हुन सजिलो सिकाउने वक्रको साथ। यसको अतिरिक्त, योसँग एक शैक्षिक भाग पनि छ, 100 सम्म 2-अङ्कको संख्याहरू गणना गर्न अभ्यास गर्न, र सम्भावनाहरू जाँच गर्न गणना।
SKYJO खरिद गर्नुहोस्
6 वर्षको उमेरदेखि तपाईसँग यो अन्य खेल पनि उत्कृष्ट बिक्रेताहरू बीच छ। सबैका लागि एक आदर्श बोर्ड खेल, विशेष गरी पार्टीहरूको लागि। तपाईले गति, अवलोकन र रिफ्लेक्सको सीपहरू प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, समान प्रतीकहरू फेला पार्दै। थप रूपमा, यसले5अतिरिक्त मिनीगेमहरू समावेश गर्दछ।
लिबेलुड दीक्षित मौलिक -...
यो 8 वर्षको उमेरबाट खेल्न सकिन्छ, र यो सम्पूर्ण परिवारको लागि पनि हुन सक्छ। 1.5 मिलियन भन्दा बढी प्रतिलिपिहरू बेचेका छन् र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरू यस खेलका कलिङ कार्डहरू हुन्। उनको कीर्ति योग्य छ। यसमा सुन्दर दृष्टान्तहरू सहित 84 कार्डहरू छन्, जुन तपाईंले आफ्नो टोलीका साथीहरूको लागि अनुमान गर्नको लागि वर्णन गर्नुपर्छ, तर बाँकी विपक्षीहरू बिना।
6 वर्षको उमेरदेखि तपाईंसँग रिफ्लेक्स र दृश्य तीक्ष्णता सुधार गर्न यो बोर्ड गेम छ, अर्थात्, लिङ्क बन्न। यसले खेलका धेरै प्रकारहरू समावेश गर्दछ, पहिले बोर्डमा तपाइँका छविहरू फेला पार्न र सम्भव भएसम्म टाइलहरूको अधिकतम संख्या प्राप्त गर्नुपर्दछ।
उमेर अनुसार बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल
तपाईंलाई मद्दत गर्न रोजेको, अवस्थित बच्चाहरु को लागी बोर्ड खेल को विशाल मात्रा दिए। त्यहाँ ती सबै उमेरका लागि र सबै स्वादका लागि, विषयवस्तुहरू, कार्टुन श्रृंखलाहरू, सम्पूर्ण परिवारका लागि, आदि छन्। यहाँ तपाइँसँग उमेर वा विषयवस्तु द्वारा विभाजित धेरै कोटिहरू छन्:
To देखि years वर्ष उमेरका बच्चाहरूको लागि
यो सबैभन्दा नाजुक किनारहरू मध्ये एक हो, किनकि यी नाबालिगहरूका लागि कुनै पनि बोर्ड गेम मात्र अनुकूल हुँदैन, र तिनीहरू सुरक्षित छन् भनी सुनिश्चित गर्न विशेष ध्यान दिइनुपर्छ। उदाहरणका लागि, तिनीहरू सुरक्षित हुनुपर्छ, तिनीहरूसँग निल्न सकिने साना भागहरू हुनु हुँदैन, न तीखो, र सामग्री र स्तर यी सानाहरूको उचाइमा हुनुपर्छ। अर्कोतर्फ, तिनीहरूले केही विशेषताहरू पनि पूरा गर्नुपर्छ जस्तै दृश्यात्मक रूपमा स्ट्राइक हुनु, सरल हुनु, सीपहरू सुधार गर्नमा केन्द्रित हुनु जस्तै मोटर कौशल, दृश्य कौशल, आदि। केही2देखि3वर्ष सम्म बच्चाहरु को लागी बोर्ड खेल को मान्य सिफारिशहरु तिनीहरू छन्:
गौला- गेम द ३...
The3Little Pigs को लोकप्रिय कथा सानाहरूका लागि बोर्ड गेममा परिणत भयो। सहकारी वा प्रतिस्पर्धी मोडमा खेल्ने सम्भावनाको साथ। यो 1 देखि4खेलाडीहरूसँग खेल्न सकिन्छ, र विभिन्न मानहरू विकास गर्न सेवा गर्दछ। उद्देश्यको लागि, त्यहाँ टाइलहरूको श्रृंखला भएको एउटा बोर्ड छ, एउटा सानो घर, र तिनीहरूले ब्वाँसो आउनु अघि घरमा कुनै सुँगुरको टाइलहरू लैजानुपर्नेछ।
तीन साना सुँगुरहरू किन्नुहोस्
Diset म तस्बिरहरु संग सिक्न
Diset - Lectron मैले सिक्ने ...
3 वर्षको उमेरका बच्चाहरूको लागि अर्को शैक्षिक खेल जसले प्रश्न र उत्तरहरू जोड्ने प्रयास गर्दछ। भिजुअल सीपहरू, आकारहरू, रङहरू, इत्यादिको भिन्नता जस्ता सीपहरू बृद्धि गर्दा तिनीहरूले रमाइलो गर्नेछन्। यसमा विभिन्न विषयहरूमा कार्डहरू छन् र एक आत्म-सुधार प्रणाली छ ताकि सानोले जाँच गर्न सक्छ कि उसले सही जवाफ दिएको छ कि जादुई पेन्सिललाई धन्यवाद जसले उज्यालो र आवाज निकाल्छ।
किन्नुहोस् म तस्बिरहरूसँग सिक्नुहोस्
बीन एडेला मौरी
माया मौरी मात्र प्रसिद्ध छैन। अब2वर्ष को उमेर देखि बच्चाहरु को लागी यो शानदार बोर्ड खेल आउँछ। यो एडेला मौरी हो, जसले आफ्नो रंग र फूलबाट अमृत सङ्कलन गरी घारमा लैजान्छ र यसरी मह बनाउन सक्षम हुने उद्देश्यले सानाहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ। जब महको भाँडो भरिन्छ, तपाइँ जित्नुहुन्छ। एकता, बुझाइ र सिक्ने रंगहरूको भावनालाई सुदृढ गर्ने तरिका।
एडेला द बी किन्नुहोस्
बीन पहिलो फल
हाबा खेलहरू: पहिलो ...
2 वर्ष देखि बच्चाहरु को लागी एक खेल। क्लासिकको पुन: प्राप्ति, जस्तै El Frutal, तर सानाहरूका लागि डिजाइन गरिएको, नियमहरूलाई तिनीहरूमा अनुकूल पार्ने र ढाँचालाई सहज बनाउने। राम्रो मोटर कौशल र सहयोग सुधार गर्न को लागी एक तरिका, तपाईले सँगै जित्नु पर्छ, र यसको लागि तपाईले कागलाई कुट्नु पर्छ, जसले फल खानु हुँदैन।
पहिलो फल किन्नुहोस्
फालोमिर स्पाइक समुद्री डाकू
Falomir- समुद्री डाकू क्लिक गर्नुहोस् ...
यो3वर्ष पुरानो बच्चाहरु को लागी रमाईलो खेलहरु मध्ये अर्को छ। यसमा ब्यारेल कहाँ राख्ने भन्ने आधार छ, जहाँ समुद्री डाकू परिचय हुनेछ र कहिले हाम फाल्ने हो थाहा हुँदैन। यसले बारीमा ब्यारेलमा तरवारहरू चलाउने समावेश गर्दछ, र समुद्री डाकू जम्प गर्ने पहिलोले जित्नेछ।
समुद्री डाकू पिन किन्नुहोस्
यदि नाबालिगहरू ठूला छन् भने, साना उमेरका लागि खेलहरू धेरै बालिश र बोरिंग हुनेछन्। उनीहरूलाई रणनीतिक सोच, एकाग्रता, मेमोरी, आदि जस्ता अन्य प्रकारका सीपहरू बढाउनमा केन्द्रित विशेष खेलहरू चाहिन्छ। ती नाबालिगहरू जो लगभग5वर्षका छन्, तपाईं बजार मा बच्चाहरु को लागि धेरै रोचक बोर्ड खेल पाउन सक्नुहुन्छ:
न उठ बाबु !
५ वर्षका बालबालिकाका लागि एउटा रोमाञ्चक खेल जसमा उनीहरूले रुलेट ह्वील घुमाएर बोर्डमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तर तिनीहरूले यो चुपचाप गर्नु पर्नेछ, किनकि बुबा ओछ्यानमा सुत्नु भएको छ र यदि तपाईंले आवाज गर्नुभयो भने तपाईंले उहाँलाई जगाउनुहुनेछ र तपाईंलाई ओछ्यानमा पठाउनुहुनेछ (बोर्डको सुरुको वर्गमा फर्कनुहोस्)।
किन्नुहोस् बुबा नउठ्नुहोस्
Hasbro गेमिङ 48380B09...
यो4वर्ष को उमेर देखि बच्चाहरु को लागी डिजाइन गरिएको बोर्ड खेल हो। एक धेरै कुटिल गधा जसले लात हान्छ र सबै सामान फाल्छ, जब उसले लात हान्छ, भाग्यले भाग्छ, तपाईंले उसलाई लगाएको सबै कुरा हावामा उफ्रन्छ। यो खेल कठिनाई को3स्तर छ: शुरुवात, मध्यवर्ती र उन्नत। यसमा पालैपालो गधाको काठीमा वस्तुहरू ढाकिएको हुन्छ।
Tozudo खरिद गर्नुहोस्
हसब्रो स्लोपी प्लम्बर
Hasbro गेमिङ - खेल ...
यो प्लम्बर ठूलो बम हो, बंगलर हो, र ऊ संघर्ष गर्दैछ। साना केटाकेटीहरूले बेल्टमा उपकरणहरू पालैपालोमा राख्नु पर्छ र प्रत्येक उपकरणले प्यान्टलाई अलि बढी छोड्नेछ। यदि तपाइँको प्यान्ट पूरै खस्यो भने, पानी छिप्नेछ। जसले अरूलाई भिजाउँदैन उसले जित्छ।
स्लोपी प्लम्बर किन्नुहोस्
गोलियाथ एन्टोन जाम्पोन
गोलियाथ - एन्टोन जाम्पोन, ...
एन्टोन जाम्पोन नामको यो प्यारा सानो सुँगुरले साना बच्चाहरूको सीप परीक्षण गर्नेछ। एउटा साधारण खेल जसमा क्यारेक्टरलाई उसको प्यान्ट नफुटेसम्म खुवाउने हुन्छ। तिनीहरूले 1 देखि6खेलाडीहरूको पालोमा खेल्न सक्छन्, तिनीहरूले कति ह्याम्बर्गरहरू खान सक्छन् भनेर जाँच गर्न रमाईलो गर्दै ...
Antón Zampon किन्नुहोस्
गोलियाथ जब्स द...
यो बच्चाहरूको लागि अर्को बोर्ड खेल हो, जहाँ तपाइँ सबैभन्दा रमाइलो माछा मार्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। ट्युबुरोन भोकाएको छ, र यसले धेरै साना माछाहरू निल्यो जुन तपाईंले माछा मार्ने रडले आफ्नो मुखबाट बाहिर निकालेर बचाउनु पर्छ। तर सावधान रहनुहोस्, किनकि कुनै पनि क्षणमा शार्कले टोक्नेछ। तपाईले कसलाई धेरै जनावरहरू बचाउन सक्नुहुन्छ जसले जित्छ।
डिसेट पार्टी र को डिज्नी
डिसेट-पार्टी एण्ड को डिज्नी...
यो पार्टी आइपुग्यो, विशेष गरी4वर्ष पुराना बच्चाहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ, र एक Disney विषयवस्तु संग। एक बहु-अनुशासनात्मक बोर्ड खेल जसको साथ सिक्न र रमाइलो गर्न। यो सम्पूर्ण परिवारको लागि प्रयोग गरिन्छ, काल्पनिक कारखानाबाट क्यारेक्टरहरूको आंकडाहरू प्राप्त गर्न धेरै परीक्षणहरू पास गर्न सक्षम हुँदै। नक्कल, रेखाचित्र, इत्यादिको परीक्षणहरू सहितको परीक्षणहरू वयस्कहरूको लागि पार्टी जस्तै छन्।
पार्टी एण्ड कम्पनी किन्नुहोस्
हसब्रो गेमिङ- बल स्लट ...
एक क्लासिक जुन शैली बाहिर जाँदैन। क्रिसमस वा अन्य समयमा सयौं र सयौं टेलिभिजन विज्ञापनहरू जब खेलौनाहरूको बिक्री बढेको छ। साना बच्चाहरूको लागि बोर्ड गेम जहाँ चार खेलाडीहरूद्वारा नियन्त्रित हिप्पोसले सबै सम्भावित बलहरू निल्नुपर्छ। जसले धेरै बल पाउँछ उसले जित्छ।
बल स्लट किन्नुहोस्
हसब्रो क्रोकोडाइल टूथपिक
यो गोही एक पेटु हो, तर यति धेरै खाँदा यसको दाँत राम्रो छैन र दाँत जाँच गर्न आवश्यक छ। मुख बन्द हुनु अघि जति सक्दो दाँत निकाल्नुहोस्, किनकि तपाईंले यो मिलनसार गोहीलाई चोट पुर्याउने दाँत फेला पार्नुहुनेछ। अर्को सरल खेल जसले साना बच्चाहरूको निपुणता र राम्रो गतिशीलतालाई प्रोत्साहन दिन्छ।
Sucker मगरमच्छ किन्नुहोस्
लुलिडो ग्राबोलो जूनियर
जुनियर ग्राबोलो, म खेल्छु...
घर मा साना को लागी एक मजेदार शैक्षिक बोर्ड खेल। यो धेरै गतिशील छ र तपाईंलाई मानसिक कौशल, अवलोकन, तर्क, र एकाग्रता विकास गर्न अनुमति दिन्छ। यो बुझ्न सजिलो छ, तपाइँ केवल पासा रोल गर्नुहोस् र तपाइँले कार्डहरू बीच बाहिर आएको संयोजन फेला पार्नु पर्छ। यसले द्रुत खेलहरूको लागि अनुमति दिन्छ र यात्राहरूमा लिनको लागि उत्तम हुन सक्छ।
Grabolo Jr किन्नुहोस्
Falomir म के हुँ?
Falomir - म के हुँ ...
एक रमाइलो बोर्ड खेल जुन मनपर्ने हुन सक्छ, एक वयस्कको लागि पनि खेल्नको लागि। यसले ट्रेडसँग सम्बन्धित शब्दावली सुधार गर्न मद्दत गर्दछ, तपाई बाहेक सबैले देख्ने कार्ड कहाँ राख्ने भन्ने हेड समर्थनको साथ, र तपाईले कार्डमा देखा पर्ने क्यारेक्टर को हो भनेर अनुमान लगाउन प्रयास गर्न प्रश्नहरू सोध्नु पर्नेछ। यो खेल मोटर कौशल, बुद्धि र इन्द्रिय सुधार गर्न को लागी आदर्श छ।
किन्नुहोस् म के हुँ?
6 र 12 वर्ष को बीच बच्चाहरु को लागि बोर्ड खेल
उमेर समूहका लागि समावेश छ and र १२ बर्ष बीचयस उमेर दायराका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने असाधारण बोर्ड गेमहरू पनि छन्। यी प्रकारका लेखहरूमा सामान्यतया अधिक जटिल चुनौतीहरू हुन्छन्, र मेमोरी, रणनीति, तर्क, एकाग्रता, अभिमुखीकरण, आदि जस्ता सीपहरूको प्रवर्द्धन परिचय दिन्छ। सबै भन्दा राम्रो मध्ये हो:
हसब्रो मोनोपोली फोर्टनाइट
मोनोपोली फोर्टनाइट (हस्ब्रो ...
क्लासिक एकाधिकार सधैं सफलताको पर्यायवाची हुन्छ, र यो कहिल्यै शैलीबाट बाहिर जाँदैन। अब फोर्टनाइट भिडियो गेममा आधारित पूर्ण रूपमा नवीकरण गरिएको संस्करण आउँछ। त्यसकारण, यो खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको मात्रामा आधारित हुँदैन, तर तिनीहरूले नक्सा वा बोर्डमा बाँच्नको लागि व्यवस्थापन गरेको समयको मात्रामा आधारित हुनेछ।
Ravensburger Minecraft बिल्डर्स र Biomes
हो, लोकप्रिय रचनात्मक र अस्तित्व भिडियो गेम Minecraft पनि बोर्ड गेमको संसारमा पुगेको छ। प्रत्येक खेलाडीको आफ्नै चरित्र हुनेछ, र धेरै संसाधन ब्लकहरू सङ्कलन गर्नुहोस्। प्रत्येक संसारका प्राणीहरूसँग लड्ने विचार हो। विजेता तिनीहरूको चिप्सको साथ बोर्ड पूरा गर्ने पहिलो हुनेछ।
Minecraft खरीद गर्नुहोस्
तुच्छ खोज ड्रैगन बल
तुच्छ खोज यात्रा...
के तपाईं ड्र्यागन बल एनिम ब्रह्माण्डको साथ लोकप्रिय ट्रिभियल पर्सुइट ट्रिभिया गेमको मजालाई एकताबद्ध गर्ने कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ अब तपाइँसँग यस खेलमा प्रसिद्ध गाथाको बारेमा कुल 600 प्रश्नहरूको साथ सबै कुरा छ ताकि तपाइँ मनपर्ने पात्रहरूको बारेमा तपाइँको ज्ञान प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ।
Cluedo उमेर: 8 देखि ...
रहस्यमय हत्या भएको छ । त्यहाँ6संदिग्धहरू छन्, र तपाईंले हत्यारामा लैजाने सुरागहरू पत्ता लगाउनको लागि अपराध दृश्य मार्फत जानुपर्नेछ। छानबिन गर्नुहोस्, लुकाउनुहोस्, आरोप लगाउनुहोस् र जित्नुहोस्। बजार मा सबै भन्दा राम्रो सोच र साजिश खेल को एक।
Devir जादुई भूलभुलैया
यदि तपाइँ डरलाग्दो रहस्यहरू मनपर्छ भने, यो तपाइँको बोर्ड खेल हो। एक साधारण खेल जहाँ तपाइँ केहि हराएको वस्तुहरू फेला पार्न प्रयास गर्न एक रहस्यमय भूलभुलैया मार्फत जानुपर्छ। तपाईंले वस्तुहरूको साथ बाहिर निस्कने प्रयास गर्न साहस देखाउनु पर्छ र तपाईंले फेला पार्नुहुने विभिन्न असुविधाहरूलाई बेवास्ता गर्दै भूलभुलैयाको कोरिडोरहरूमा जानुहोस्।
The Magic Labyrinth किन्नुहोस्
आतंकको महल द...
Atom Games ले यो डरलाग्दो रमाइलो बोर्ड गेमको विकास गरेको छ, राक्षसी क्यारेक्टरहरू र वस्तुहरू सहित 62 कार्डहरू। तिनीहरूसँग तपाईं विभिन्न तरिकामा खेल्न सक्नुहुन्छ (जस्तै अन्वेषक, गति मोड, र अर्को मेमोरी), घरका साना बच्चाहरूको सीप सुधार गर्दै।
आतंकको महल किन्नुहोस्
डिसेट पार्टी एण्ड को जुनियर
Diset - खेल पार्टी र सह ...
बच्चाहरूको लागि प्रसिद्ध पार्टी र सह बोर्ड खेलको अर्को संस्करण। तपाईं टोलीहरू बनाउन र विभिन्न परीक्षणहरू पास गर्न रमाईलो गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। फाइनल स्क्वायरमा पुग्ने पहिलोले जित्नेछ। यो गर्नको लागि, तपाईंले रेखाचित्र परीक्षण, संगीत, इशारा, परिभाषा, प्रश्नहरू, आदि पास गर्नुपर्छ।
हसब्रो गेमिङ गेम...
अर्को क्लासिक, एक खेल जुन विश्वभर फैलिएको छ र जसले खेलाडीहरूको निपुणता र शारीरिक ज्ञानको परीक्षण गर्दछ। एक बिरामी बिरामी छ र विभिन्न भागहरू हटाएर शल्यक्रिया गर्न आवश्यक छ। तर सावधान रहनुहोस्, तपाईलाई सर्जनको पल्स चाहिन्छ, किनकि यदि टुक्राहरूले पर्खालमा छोयो भने तपाईको नाक उज्यालो हुनेछ र तपाईले हराउनुहुनेछ... र यदि तपाईलाई मिनियनहरू मनपर्छ भने, त्यहाँ यी क्यारेक्टरहरूको संस्करण पनि छ।
हसब्रो को हो?
हसब्रो गेमिङ जो,...
सबैलाई थाहा भएको अर्को शीर्षक। प्रति व्यक्ति एउटा बोर्ड जसमा वर्णित वर्णहरूको श्रृंखला छ। उद्देश्य भनेको प्रश्नहरू सोधेर र उसले तपाईंलाई दिनुभएको सुरागसँग मेल नखाने पात्रहरूलाई खारेज गरेर विरोधीको रहस्यमय चरित्र अनुमान गर्नु हो।
किन्नुहोस् को को हो?
शैक्षिक बोर्ड खेलहरू
त्यहाँ बच्चाहरूको लागि केही बोर्ड गेमहरू छन् जुन रमाइलो मात्र होइन, तर पनि छन् तिनीहरू शैक्षिक छन्, त्यसैले तिनीहरू खेलेर सिक्नेछन्। उनीहरूका लागि बोरिङ वा थकाइलाग्दो कार्य समावेश नगरी विद्यालय शिक्षालाई सुदृढ गर्ने तरिका, र जसमा सामान्य संस्कृति, गणित, भाषा, भाषाहरू, इत्यादिका सामग्रीहरू हुन सक्छन्। यस श्रेणी मा सबै भन्दा राम्रो हो:
एक रमाइलो शैक्षिक पज्जल खेल स्थानिक दृष्टि, समस्या समाधान, विभिन्न स्तर चुनौतीहरु संग तर्क, र एकाग्रता को विकास गर्न को लागी। गेमिफिकेशनको साथ संज्ञानात्मक कौशल र लचिलो सोच सुधार गर्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक।
भूतहरूको घर किन्नुहोस्
मन्दिर जाल - स्मार्ट ...
यो शैक्षिक बोर्ड गेमले तर्क, लचिलो सोच, दृश्य धारणा, र एकाग्रता बढाउँछ। तपाईंसँग 60 विभिन्न चुनौतीहरूको साथ छनौट गर्न कठिनाईको धेरै स्तरहरू छन्। एउटा पजल जसमा मानसिक क्षमता खेल्ने कुञ्जी हुनेछ।
मन्दिर जाल किन्नुहोस्
रंग राक्षस, ...
अचम्मको शैक्षिक बोर्ड गेम जहाँ खेलाडीहरूले भावना वा भावनाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने रङहरू मार्फत सर्छन्, यसले3देखि6वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि भावनात्मक सिकाइको रूपमा बनाउँछ। विद्यालयहरूमा प्रायः बिर्सिने कुरा र उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य र अरूसँगको सम्बन्धको लागि महत्त्वपूर्ण छ।
रंग राक्षसहरू किन्नुहोस्
4 वर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरु को लागी डिजाइन गरिएको खेल र अंग्रेजी र स्पेनिश मा भाषा कौशल विकास गर्न को लागी लक्ष्य छ। यो गर्नका लागि, छविहरू र शब्दहरूसँग कार्डहरूको श्रृंखला प्रयोग गर्नुहोस् जुन तिनीहरूलाई सही रूपमा मिलाउन एकअर्कासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ।
एउटा खेल जसमा सम्पूर्ण परिवारले भाग लिन सक्छ, र जसमा साना बच्चाहरूले जनावर र भूगोलको बारेमा सिक्नेछन्। 72 भाषाहरू (स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रान्सेली, जर्मन, इटालियन, डच र पोर्तुगाली) मा7विभिन्न जनावरहरू र निर्देशनहरू सम्म।
बच्चाहरु र वयस्कों को लागि बोर्ड खेल
तपाईंले बच्चाहरूका लागि बोर्ड गेमहरू पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ जससँग बच्चाले खेल्न सक्छ एक वयस्क संग, यो आमा, बुबा, हजुरबा हजुरआमा, ठूला भाइबहिनी, आदि। घरको सानोको हेरचाह गर्ने र तिनीहरूको खेलहरूमा भाग लिने तरिका, तिनीहरूका लागि र वयस्कहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, किनकि यसले तपाईंलाई धेरै समय खर्च गर्न र तिनीहरूलाई अलि राम्रोसँग चिन्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह जब तिनीहरू ठूलो हुन्छन् तिनीहरूले तपाईंले खेलहरूसँग बिताएका ती समयहरू बिर्सने छैनन्:
१० टुक्रा पहेली
500 टुक्रा को पहेली ...
सुपर मारियो ओडिसी विश्व यात्रीको संसारबाट 500-टुक्रा पजल थीम। एक परिवारको रूपमा निर्माण गर्ने तरिका, 10 वर्षको उमेरका बच्चाहरूको लागि उपयुक्त। एक पटक जम्मा भएपछि, यसको आयाम 19 × 28.5 × 3.5 सेमी हुन्छ।
सौर्यमण्डलको थ्रीडी पजल
Ravensburger - पजल 3D, ...
खगोल विज्ञानको बारेमा खेल्ने र सिक्ने अर्को तरिका ग्रह प्रणालीको यो 3D पजल निर्माण गर्नु हो। यसमा सौर्यमण्डलका ८ वटा ग्रह र २ वटा ग्रह रिङहरू छन्, जसमा सूर्यका अतिरिक्त ५२२ वटा टुक्राहरू छन्। पजल पूरा भएपछि, यसलाई सजावटको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। इष्टतम उमेरको लागि, यो 8 वर्ष देखि हो।
3D पजलहरू किन्नुहोस्
ColorBaby - टेबल...
एउटै टेबलमा तपाईंसँग 12 फरक खेलहरू हुन सक्छन्। यसको आयाम 69 सेन्टिमिटर उच्च छ, र बोर्डको सतह 104 × 57.5 सेमी छ। 150 भन्दा बढी टुक्राहरू र पूल, टेबल फुटबल, हक्की, पिङ-पङ्, चेस, चेकर्स, ब्याकग्यामन, बलिङ, शफलबोर्ड, पोकर, घोडाको नाल र पासा खेल्नको लागि आदानप्रदान गर्न मिल्ने सतहहरू भएको मल्टिगेम सेट समावेश गर्दछ।6वर्ष देखि बच्चाहरु र सम्पूर्ण परिवार को लागी आदर्श। मोटर कौशल, म्यानुअल कौशल, तार्किक सोच, र सिकाइ विकास गर्न मद्दत गर्ने तरिका।
मल्टिगेम टेबल किन्नुहोस्
म्याटेल स्क्र्याबल मूल
म्याटेल गेम्स स्क्र्याबल...
10 वर्षको उमेरदेखि, यो खेल सम्पूर्ण परिवार र उमेरका लागि सबैभन्दा रमाइलो र मनोरञ्जन हुन सक्छ। यो सबैभन्दा प्रशंसित खेलहरू मध्ये एक हो, प्रत्येक खेलाडीले लिने7अनियमित टाइलहरूसँग उच्चतम क्रसवर्ड स्कोर प्राप्त गर्न रमाईलो हिज्जे शब्दहरू। शब्दावली सुधार गर्न को लागी एक तरिका।
म्याटेल खेलहरू - पिक्शनरी ...
यो उत्कृष्ट ज्ञात खेलहरू मध्ये अर्को हो, क्लासिक रेखाचित्र खेलको संस्करण जसमा तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो रेखाचित्रहरूद्वारा व्यक्त गर्न चाहनु भएको कुरा अनुमान लगाउन प्रयास गर्नुपर्नेछ। यो समूहहरूमा खेल्नुपर्दछ, र यसले तपाईंलाई सुपर रमाइलो परिस्थितिहरूमा लैजान्छ, विशेष गरी ती सदस्यहरूसँग जसको चित्रकला कौशल पिकासियन हो ...
त्यसलाई हराउनुहोस्! - द...
यो ती बोर्ड खेलहरू मध्ये एक हो जसले तपाईंलाई सार्न र सबै प्रकारका पागल परीक्षणहरू प्रदर्शन गर्दछ। सामना गर्न चुनौतीहरू, 160 हास्यास्पद परीक्षणहरू जसमा तपाईंले उडाउनु, सन्तुलन, जुगल, जम्प, पाइल, आदि गर्नुपर्नेछ। हाँसो ग्यारेन्टी भन्दा बढी छ।
बीट त्यो किन्नुहोस्!
आश्चर्यका दिनहरू - पहिलो ...
ती खेलहरू मध्ये एउटा जुन सानाहरूलाई मनपर्छ तर त्यो सम्पूर्ण परिवारको लागि उपयुक्त छ। जोसँग साहसीहरूको आत्मा छ र ठूलो नक्सामा युरोपको मुख्य शहरहरू हुँदै यो द्रुत गतिको रेल यात्रामा जानुहोस् जहाँ उनीहरूले तपाईंलाई परीक्षामा राख्नेछन्। प्रत्येक खेलाडीले नयाँ मार्गहरू निर्माण गर्न र रेल नेटवर्क विस्तार गर्न वैगन लोडहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ। जसले गन्तव्यको लागि टिकटहरू पूरा गर्छ उसले खेल जित्छ।
पहिलो यात्रा किन्नुहोस्
यदि तपाइँ खेलहरू मन पराउनुहुन्छ जुन तपाइँलाई हसाउनमा केन्द्रित छ, तब यो ती मध्ये अर्को हो। सम्पूर्ण परिवार र साथीहरूसँग खेल्नुहोस्,3फरक कौशल स्तरहरूसँग। यसमा तपाईंले तिनीहरूलाई तपाईंलाई बुझ्ने प्रयास गर्नको लागि द्रुत नक्कल प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ, र 320 कार्डहरूको साथ विस्तृत भण्डारको साथ।
Asmodee - The Island -...
यो बोर्ड गेमले तपाईंलाई बीसौं शताब्दीमा अन्वेषणको बीचमा लैजान्छ। एउटा साहसिक खेल जहाँ महासागरको बीचमा एउटा रहस्यमय टापु पत्ता लगाइएको छ र जसको किंवदन्तीले खजाना लुकाउँछ भनी बताउँछ। तर साहसीहरूले विभिन्न बाधाहरू, समुद्री राक्षसहरू, र ... विस्फोट हुने ज्वालामुखीको सामना गर्नुपर्नेछ जसले टापुलाई बिस्तारै डुब्नेछ।
Carcata - बोर्ड गेम र ...
Carcata साहसिक र रणनीति मिश्रण गर्दछ। यसमा तपाईंले आफ्नो जनजातिलाई ज्वालामुखी भएको टापुमा अवतरण गर्नुपर्नेछ र यो ठाउँमा हुने खतराहरूबाट बच्ने सबैभन्दा बलियो जनजाति कुन हो भनेर देखाउनुपर्छ। तपाईंको क्षेत्रहरू सुरक्षित गर्नुहोस्, विरोधी जनजातिहरूको चालहरू निगरानी गर्नुहोस्, अग्रिम गर्नुहोस्, रत्नहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, र टापुलाई बचाउने आत्मामा सधैं नजर राख्नुहोस् ...
नाबालिगहरूको लागि बोर्ड खेल खरीद गाइड
https://torange.biz/childrens-board-game-sea-battle-48363 बाट नि:शुल्क तस्विर (बच्चाको बोर्ड गेम सी ब्याटल)
बोर्ड गेम छनोट गर्नु सजिलो काम होइन, किनकि त्यहाँ बजारमा लन्च गरिएका धेरै भन्दा धेरै कोटीहरू र शीर्षकहरू छन्। तर बच्चाहरु को लागी एक बोर्ड खेल छनोट अझ जटिल छ, केहि कारकहरु लाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। नाबालिगको सुरक्षाको लागि:
सिफारिस गरिएको न्यूनतम उमेर
बच्चाहरु को लागि बोर्ड खेल सामान्यतया को एक संकेत संग आउँछ न्यूनतम र अधिकतम उमेर जसको लागि तिनीहरू अभिप्रेरित छन्। प्रमाणीकरण जसले तिनीहरूलाई तीन आधारभूत मापदण्डहरूमा आधारित त्यो उमेर समूहको लागि मान्य बनाउँछ:
सुरक्षा: उदाहरणका लागि, साना बच्चाहरूले पासा, टोकनहरू, आदि जस्ता टुक्राहरू निल्न सक्छन्, त्यसैले त्यो उमेरका खेलहरूमा यस प्रकारका टुक्राहरू हुँदैनन्। यो महत्त्वपूर्ण छ कि उत्पादनसँग CE प्रमाणीकरण छ, यो जान्नको लागि कि यसले EU सुरक्षा मापदण्डहरू पार गरेको छ। यी नियन्त्रणहरू बिना एशियाबाट आउने नकली र अन्य खेलौनाहरूबाट सावधान रहनुहोस् ...
कौशलसबै खेलहरू कुनै पनि उमेरका लागि हुन सक्दैनन्, केही सानाहरूका लागि तयार नहुन सक्छन्, र तिनीहरू गाह्रो वा असम्भव हुन सक्छन्, र निराश भएर खेल छोड्न पनि सक्छन्।
सामाग्री: सामग्री पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि केही विषयवस्तुहरू हुन सक्छन् जुन वयस्कहरूका लागि विशिष्ट छन् र नाबालिगहरूका लागि उपयुक्त छैनन्, वा केवल एक विशिष्ट उमेर समूहले मन नपराउने भएकाले उनीहरूले बुझ्दैनन्।
यो सुविधा महत्वपूर्ण छैन, तर हो महत्त्वपूर्ण। यो खेलको प्रापकको स्वाद र प्राथमिकताहरू जान्न सकारात्मक छ, किनकि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको विशेष विषयवस्तु (विज्ञान, रहस्य, ...), वा तिनीहरू चलचित्र वा टेलिभिजन श्रृंखला (टॉय स्टोरी) को प्रशंसक हुन सक्छन्। , Hello Kitty, Dragon Ball, Rugrats,...) जसका खेलहरूले तपाईंलाई खेल्नको लागि सबैभन्दा बढी उत्प्रेरित गर्नेछ।
यो सुविधा मूल्यसँग मात्र सम्बन्धित छैन, तर खेलको सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित छ (साना टुक्राहरूमा टुक्रा नगर्नुहोस् जसले चोकिङ, तीखो टुक्राहरू जसले चोटपटक निम्त्याउन सक्छ ...) र स्थायित्व। केही खेलहरू तुरुन्तै तोड्न वा अप्रचलित हुन सक्छन्, त्यसैले यो बचत गर्न केहि हो।
पोर्टेबिलिटी र अर्डर
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको खेल खोज्नु हो जुन भित्र आउँछ एउटा बक्स वा झोला जहाँ तपाइँ सबै घटकहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा ध्यान दिनुको कारणहरु यस प्रकार छन्:
ताकि नाबालिगले सजिलै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान सकोस् ।
उसलाई पिक अप गर्न निमन्त्रणा गरेर खेल समाप्त भएपछि अर्डरलाई प्रोत्साहन दिनुहोस्।
त्यो सजिलै भण्डारण गर्न सकिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » बच्चाहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेलहरू
सबै भन्दा राम्रो एस्केप कोठा बोर्ड खेल
वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेलहरू